Tababarihii Kooxda Man United oo Shaqada laga ceyriyay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Tababarihii Kooxda Man United oo Shaqada laga ceyriyay
“Manchester United waxay ku dhowaaqeysa in Ole Gunnar Solskjaer uu ka tegay xilkiisa macallinimo ee kooxda,” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay kooxda.
“Ole waxa uu weligiis ahaan doonaa halyey Manchester United, waxaan aad uga xunnahay inaan gaarnay go’aankan adag.”
Kooxda ayaa sheegtay in kulamada soo socda uu tababare kooxda usii ahaan doono Michael Carrick oo ka mid ahaa tababarayaasha ka hoos shaqeynayey Ole, illaa laga magacaabayo tababare ku-meel gaar ah oo xilli cayaareedka dhammeeya.
Kooxda Watford oo ka mid ah kuwa ugu hooseeya kala horeynta horyaalka Premier League ayaa habeenkii Sabtida 4-1 kaga adkaatay Manchester United.
Kahor kulankaas waxaa kooxda 2-0 ku garaacday Manchester City, ayada oo toddobaadyo kahorna guul-darro xooggan oo 5-0 ah ay kala kulantay kooxda ay xifaaltamaan ee Liverpool.
Previous articleSAWIRO:- Meydka Agaasimihii Radio Muqdisho oo la Aasay
Next articleRW Rooble oo qaabilay Agaasime Goboleedka dalalka Carabta